Uma kwenzeka ngenkathi umsebenzi wenhlangano yakho, unquma ukushintsha imingcele ye-LLC njengo: ukuguqulwa koMqondisi Jikelele, ushintsho lwekheli lezomthetho le-LLC, izinguquko ezinhlotsheni zemisebenzi, ukungena / ukuphuma kwelungu lenkampani, ukuchitshiyelwa kwe-Charter ye-LLC nezinye izilungiso zolwazi mayelana ne-LLC, Ungaxhumana nenkampani ethi "Smart Way" futhi ochwepheshe bethu bazoqhuba yonke imisebenzi edingekayo ngesikhathi esifushane kakhulu.
Okokuqala kufanele kuqashelwe ukuthi noma yiziphi izinguquko ku-LLC zihlukaniswe zibe izinhlobo ezimbili:
Ukwenza ushintsho ku-LLC, kumadokhumenti asemthethweni (Umqulu, imemorandamu yenhlangano - ukuguqula ubukhulu bendlunkulu egunyaziwe, ukushintsha ikheli lezomthetho, ukuguqula igama le-LLC, ukushintsha igama labaphathi be-LLC, ukwandisa / ukunciphisa isikhathi sesikhundla senhloko yenhlangano).
Izinguquko ezingahlobene nokufakwa kumadokhumenti asemthethweni we-LLC (ukungena / ukuphuma kwamalungu we-LLC, umnikelo / ukuthengiswa kwamasheya ku-charter ye-LLC, ukuguqulwa koMqondisi Jikelele, izinhlobo zezenzo ze-OOO OKVED, ulwazi mayelana namalungu we-LLC, ulwazi mayelana nabathintekayo / ).
Kuye ngokuthi yiziphi izinguquko ezenzeka enhlanganweni yakho, zingaphansi kokubhaliswa ngesisekelo sezinhlobo ezithile zezicelo - P13001, P14001. Futhi, amaphepha amaningi kumele athunyelwe ukuqinisekisa ukuchibiyela igunya lokubhalisa (intela). Kuncike kokuqukethwe kwezinguquko, kufanele uthumele: iprotocol / isinqumo sokuchibiyela, umqulu omusha we-charter noma izichibiyelo ezihlokweni zenhlangano, amadokhumenti okukhokha ekukhokhweni kwemali kahulumeni yokwenza izinguquko, amadokhumenti okukhokha ngokwenza umnikelo owengeziwe kumqulu we-LLC, njll.
Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe ekudlulisweni kwamasheya enhloko-dolobha egunyaziwe ye-LLC. Lo msebenzi ungahle uhlelwe ngokunikela ngezabelo, ukuthenga nokuthengisa izingqinamba, ukudlulisela isigxobo ku-LLC. Uma kwenzeka ukuthi umnikelo noma ukudayiswa kwenziwa phakathi kwamalungu enkampanini, ukudluliselwa kwamasheya kungenziwa ngendlela elula ebhaliwe. Uma isabelo sidlulela komunye umuntu, inkontileka kumele ibhaliswe ehhovisi lika-notary nakanjani. Ukudluliselwa kwamasheya emphakathini kuyisimo sangaphakathi emphakathini futhi sisungulwe yimibhalo yangaphakathi. Isicelo sokubhaliswa kwezinguquko sisayinwe nguMqondisi Jikelele. Izidingo ezicacile zibekiwe eMthethweni we-LLC yakho futhi zilawulwa umthetho ngokubhaliswa kwezinhlangano zomthetho eRussia Federation.
Ukungaqiniseki kokuthengiselana ngamasheya eNkampani kudinga ukuthi ukubhaliswa kwamaphepha anjalo kube ukunikezwa / ukwamukelwa kokuthola amasheya, imvume yelungu ngalinye lenkampani ukudayiswa noma ukunikezwa kwamasheya, ukuba khona kwabo bonke abantu abanentshisekelo ngokusayina imibhalo evela kunothi, ukuphawula kwesaziso kwerhafu. Ngalolu hlelo, ummeli wencwadi uthumela imibhalo yokubhalisa, babuyiselwa inkampani ngeposi ekhelini lezomthetho / leposi lenhlangano.
Uma umhlanganyeli omusha engena ku-LLC ngokwenza imali eyengeziwe emineninini egunyaziwe, imvume yabo bonke abahlanganyeli benkampani iyadingeka, okumelwe ihlelwe yinkambiso / isinqumo somhlangano jikelele wabahlanganyeli. Ukuze ubhalise umhlanganyeli omusha intela, kufanele unikeze isiqiniseko sokukhokha - amadokhumenti okukhokha ebhange.
Kumele kuqashelwe ukuthi ngaphansi kwemithetho emisha ngemuva kokubhalisa inhlangano esemthethweni ayikhiphe ukukhishwa kweRejista Yombuso Ehlanganisiwe Yezinkampani Zomthetho. Idokhumenti entsha - Ishidi lokufaka. Iqukethe inombolo ye-OGR enikezwe kulolu shintsho, nokuqukethwe kolwazi olusha. Lezi zindlela ezintsha azibonakali ngokuphelele esikhathini esizayo emphakathini - ama-counterparties amaningi, amabhange, amakhasimende kahulumeni adinga ukuqinisekisa ukuthi ulwazi lwamanje mayelana nenhlangano esemthethweni lukhishwe kwiRejista Yombuso Ehlanganisiwe Yezinkampani Zomthetho. Kuzodingeka ukuthi ihlelwe ngokwehlukana. Umnqamulajuqu wokuthola lolo dokhumenti ku-IIFNS luvela ezinsukwini ezimbili kuya kwezingu-7.
Inqubo yokugcwalisa imibhalo edingekayo, okwenza izinguquko ku-LLC kubasebenzi benkampani ethi "Smart Way" ivamile emisebenzini yabo. Kodwa-ke, abantu abangaxhunyiwe nomsebenzi wezomthetho oqhubekayo, le nqubo ingabangela imibuzo eminingi. Kunzima ngesimo sezinto ezintsha, esasetshenziswa ngoJulayi 4, 2013. Iziphathimandla zentela azikoni ukubonisana ngokucacile ngokufaneleka kokugcwalisa imibhalo yokubhalisa. Kungenzeka ukuthi kusekelwe kuphela kulokho okuhlangenwe nakho kanye nokuhlangenwe nakho kozakwethu. Siyaqonda ukuthi awunaso isikhathi noma ithuba lokugada izinguquko emithethweni elawula inqubo yokubhalisa i-LLC nokwenza izinguquko kumadokhumenti we-LLC. Ngakho-ke, sikumema ukuthi ufake isicelo sosizo kubaqeqeshi ebhizinisini lakho - abameli benkampani ethi "Smart Way". Ngeke sifeze kuphela izinqubo ezidingekayo kulezi zindaba, kodwa futhi unikeze izeluleko zomthetho ezincwadini zakho ezisebenzayo, usizo kanye nokucacisa izinhlinzeko zabo, nokwandisa inani lamadokhumenti enhlanganweni yakho.
Buka ukudayela njengendlela yokukhetha oyinhloko